Rusununguko rweVanyori | Martech Zone
Muvhuro, Ndira 29, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino rave rinonakidza maererano neWebhu. Ndiri mutendi akasimba mune zvese capitalism uye nerusununguko. Iwo mativi maviri echiyero chakangwarira. Pasina rusununguko, vapfumi vachatonga. Pasina capitalism, hauzombove nemukana wehupfumi.
Chekutanga Chinongedzo cheBumbiro: Kongiresi haingaite mutemo zvine chekuita nekumisikidzwa kwechitendero, kana kurambidza kushandiswa kwemahara; kana kudzikisira rusununguko rwekutaura, kana rwevezvenhau; kana kodzero yevanhu yekuungana zvine rugare, uye kukumbira hurumende kuti igadzirise zvichemo.
Zvakakosha kuyeuka kuti pakanyorwa Bumbiro, "Press" raive boka remagag-tag vagari vaive nemichina yekutsikirira. Vakanga vasiri iwo makambani makuru aive akatungamirwa neane simba rese rekushambadzira dhora sezvaari mazuva ano. "Bepanhau" raiwanzova benzi, rimwe chete, raishora hurumende. Pepanhau rekaresa, iyo Hartford Courant, yakatomhan'arirwa naThomas Jefferson kuti ane mhosva ... uye akarasikirwa.
Inzwi rakajairika? Inofanira. Zvakafanana nekuva, toti, webhusaiti kana blog. Iyi ndiyo inotevera "Dhinda" uye yakapusa blog blog inogona kunge inotaridzika zvakanyanya sezvakaitwa nemapepanhau mumakore ekutanga enyika yedu huru. Masangano akaita se Electronic Frontier Foundation ita shuwa kuti rusununguko irworwo rwakaramba ruchichengetedzwa. Tora tariso imwechete pawebsite yeEFF uye iwe unowana yakawanda yemienzaniso yemabhizimusi makuru kuyedza kutora pane mukomana mudiki.
Mushure mekunge mari yaerera, nyaya inochinja handiti? Vatori venhau veNBC vanowanikwa vachisvetuka majeti nevashambadzi, kupokana kwekufarira. Vaimbi vanokanganwa mazuva ekuti hapana munhu anokoshesa hunyanzvi hwavo, uye vanodzosera iyo RIAA kurwira kuenderera nekuunganidza mamirioni kuitira kuti Cristal irambe ichiyerera uye inotevera bling inogona kutengwa. Uye mawebhusaiti nemakambani einternet anoita kuti mamirioni akanganwe kuti ivo vakatanga neakarova kamwe, kamwe chete kutendeuka.
Vhiki rino ranga richinakidza. Ndakaona apo Robert Scoble akamira, dzimwe nguva akasimba zvishoma, kuona kuti kiredhiti pawebhu yakaitiswa kwayanga yakakodzera. Robert anozviongorora uye anobvuma kuita hobho zvishoma uye nekukanganwa kwaakatanga. Zvakanaka kuona izvi.
Ini zvakare ndakatarisa seGoDaddy yakapinda mukati nekucheka mumwe wevatengi vavo panguva yekuda kwekambani hombe. Pasina mubvunzo kuti GoDaddy aizove nayo haana waita izvi nemutengi muhombe. Vakayera njodzi, zvakadaro, uye vakafunga kuti ivo vaingobhenekera mosikito paruoko rwavo. Dambudziko raive rekuti vaka flicker humhutu hwakaipa. Iye zvino vane NoDaddy yekutarisana nayo. (Zaruriro izere: Ndagadzira logo panzvimbo yeNoDaddy manheru ano.)
Google ikozvino inobvuma kuti vakaita chikanganiso pakuvhura bhizinesi muChina neyakaongororwa vhezheni yavo Yekutsvaga Injini. Zvikuru. Ndiri kufara ivo vanonzwisisa kuti izvi zvinodzosera sei maoko enguva pane vanhu vakadzvinyirirwa vanowana rusununguko.
Kutenda kunaka kweRusununguko rweVanyori! Uye tenda kunaka kweRusununguko rweInternet!